ရွှေလီမြို့ကို ရှေးယခင်က မိုင်းမောမြို့ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ တရုတ်ဘာသာစကားအားဖြင့် မွင့်မောင်ဟု အသံထွက်ရသည်။ ယခုအမည်ဖြစ်သော ရွှေလီကို တရုတ်ဘာသာစကားအားဖြင့် ရွေ့လိ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ရွေ့မှာ ကံကောင်းခြင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး၊ လိမှာ လှပခြင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
တရုတ် လူမျိုးနှင့် ရှမ်းလူမျိုးများသည် မြို့တွင်း ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင် နေထိုင်ကြပြီး ဂျိန်းဖော့လူမျိုးနှင့်ပလောင်တအာင်းတို့သည် မြို့ဆင်ခြေဖုံးဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ လူဦးရေ ၁၄၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
↑ Yunnan’s Sin City Archived4October 2010 at the Wayback Machine., The Irrawaddy, January 2005
↑ Sex, Drugs and The Roll of Dice Archived4September 2009 at the Wayback Machine., Time Asia, September 27, 1999
Ruili City Official Website Archived 25 July 2008 at the Wayback Machine.
Ruili Municipal People's Government Archived6March 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေလီ&oldid=699413" မှ ရယူရန်